people Nepal » आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २२ गते मंगलबार आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २२ गते मंगलबार – people Nepal
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल चैत्र २२ गते मंगलबार
आज श्री शाके १९३९, वि.सं. २०७३ साल चैत्र २२ गते मंगलबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ अप्रिल ४ तारीख, भौमाष्टमीव्रत गोरखकालिपूजा, चैतेदशैँ, भवानिको उत्पति श्रीश्वेतमत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा, अशोकको पाउला खाने (जमयात) चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथी १५ः१५ बजे सम्म चन्द्रमा मिथुन राशिमा २१ः०० बजे सम्म सूर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे)
सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका दाजु भाई तथा ईष्टमित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ ।
जीबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु बृद्धि हुनसक्छन् । नेत्र सम्बन्धि समस्याले सामान्य खर्च हुनसक्ने योग रहेको छ ।
नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ । समय राम्रो रहेको छ ।
मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । ब्यापार ब्यबसाय बाट राम्रो लाभ हुने दिन परेको छ । मनमा चन्चलताले बास गर्नेछ । प्राकृतिक क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानि हुन सक्छ ।
मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्रा झन्झट पुर्ण रहनेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । संगित क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । पेट सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ ।
ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । भोज भतेरमा सरीक हुने समय रहेको छ । सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । पारीवारको साथ सहयोग द्वारा आम्दानि क्षेत्रमा मार्गदर्शन मिल्नेछ । भोग बिलासको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुन सक्छ । ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ ।
पारीवारिक समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । मन प्रशन्न रहला । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । सामान्य यात्रा हुन सक्छ । चाढो क्रोधको सिकार भईनेछ सजग रहनु होला ।
निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बिद्या प्राप्ति योग रहने छ । संगित क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ ।